I-Peaks West 14 Brand New 2BD/2BT Condo ene-Hot tub - I-Airbnb
I-Peaks West 14 Brand New 2BD/2BT Condo ene-Hot tub
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Top Of The Mountain
I-Peaks West 14 iyingxenye yokwakhiwa okusha e-West Village of Sun Peaks, futhi ungase ube omunye wezivakashi zokuqala ukuhlala lapha!
Leli khaya yindlu enhle futhi egqamile, enamakamelo okulala amabili, i-condo enamakamelo okulala amabili esitezi sesibili enobhavu wamanzi ashisayo wangasese kuvulandi wakho. Kukhona ne-ski locker yangasese emnyango wekhaya ukuze kube lula kuwe.
Kunekhishi eligcwele elinezihlalo ezingu-4 esiqhingini, kanye nosofa omkhulu ongu-L egumbini lokuphumula. Ngaphansi kwe-flat enkulu exhonywe odongeni i-TV nayo iyindawo yomlilo yesimanje yokunethezeka okwengeziwe! Jabulela indawo eyengeziwe ngenxa yophahla oluwuvulande.
Leli khaya linombhede omkhulu ekamelweni lokulala elikhulu, onekhabethe lokungena eliholela egumbini lokugezela eliseduze, kanye nombhede omkhulu ekamelweni lesibili. Igumbi lokugezela lesibili liqhathaniswa nehholo ukusuka ekamelweni lesibili. Kunendawo yokuwasha esekamelweni enomshini wokuwasha/wokomisa izingubo, futhi insipho yokuwasha izingubo iyatholakala.
I-Peaks West ingenye yezakhiwo ezintsha e-Sun Peaks, futhi izinga eliphansi liyikhaya lesigaba esisha sezentengiselwano esizobonisa izindawo ezintsha ezifana ne-Ohana Deli & Market, i-The Magic Cattleguard eatery ne-pub, ne-Sun Peaks Yoga studio.
Ngaphansi nje komgwaqo futhi ngaphesheya kwe-Burfield Chairlift kukhona ihostela le-Burfield eline-The Burfield Bistro ezingeni eliphansi, ngakho-ke izivakashi kule ndawo eziyinkimbinkimbi zingase zijabulele ikhofi lazo lasekuseni, noma ukudla okulula kwe-ski.
I-Peaks West cishe uhambo lwemizuzu engu-15 oluya edolobhaneni elikhulu, kanye ne-Sundance ne-Sunburst Chairlifts.
Ibungazwe ngu-Top Of The Mountain
I-Top Of The Mountain Accommodations itholakala ngocingo noma nge-imeyili phakathi namahora avamile ebhizinisi izinsuku ezingu-7 ngesonto futhi inokuxhumana naye 24/7 otholakalayo ezimeni eziphuthumayo zangemva kwamahora.